Prezidaant Doonaald Traamp jimaata darbe hariiroon Israa’elii fi Sudaan gidduu jiru haareffamuu isaa ennaa ibsan haleellaa Masriin hidha Abbayyaa irratti raawwattu erga tuqanii booda waajjirri muummicha ministeeraa ibsa baasee jira.
Itiyiipiyaan laggeen ishee daangaa ce’anii yaa’an ilaalchisee mala haqaa fi sababaa qabu kan fayyadamtu ta’uu kan tuqe ibsi kun lammiiwwan Itiyoopiyaa misomaa fi fedhii fi murannoo isaan qaban shakkii tokko malee kan ragaan ba’ameef hidha kanaaf tokkummaan deggersa isaan gumaachanii jedha ibsichi.
Itti aansuu dhaanis hidhi sun biyyi tokkoo fi uummati ishee boonu jireenya isaa darbetti gadduu dhiisee waan hin danda’amne kan fakkaatu kan of harka galchuuf kan qabsaa’o mallattoo jijjiiramaa ti jedha.
Akkuma kanaan ganna darbe boqonnaa duraa kan lagaasana bishaaiin guutuu ijifannoo tokko ta’uu mul’isa jedha ibsi sun. Ijaarsa hidha Abbayyaatti dabalee Itiyoopiyaan biyyoota toora lagi kun itti dhangala’u waliin fayyadama haqa qabuuf walii galtee agarsiisuuf fedhii isheen qabdu sirriitti mul’isuu ishee isi sun ereera.
Karaa gamtaa Afriikaan biyyoota naannoo lagi kun itti dhangala’uu gad jiran waliin marii geggeessitus ibsi kun akka raga tokkootti ibsi sun tuqee jira. Haa ta’u malee qaamotiin hangi tokko har’as Itiyoopiyaan walii galtee haqa hin qabneef akka iseen jilbeenfattu gochuuf doorsiisaa kan jiran ta’u ibsi kun tuqee jira.
Matakkalitti Qaamoleen Naga-eegumsa Meeshaa Waraanaa Seera Qabeessa Tahe Hawaasa Oromoorraa Hiikkachiisaa Jiraachun Himame
Wal-falmii Xumuraa Traamp fi Baayden Irratti Waa’een COVID 19 Dubbii Ijoo Ture